I-Inference: Ulungelo olubalulekileyo ekufundeni ukuqonda
Xa uvavanya ukuqonda kokufunda komfundi, ukukwazi kwakhe ukwenza inkcazo ngokusekelwe kwicandelo lokufunda elibalulekileyo liya kuba nefuthe elikhulu ekusebenzeni jikelele. Olu buchule lokuqonda lokubaluleka olubalulekileyo luyimfuneko ukuqonda iingcamango ezinxulumene nengcamango ephambili , injongo yombhali , kunye netoni yombhali .
Ukubaluleka kuthathwa ngokuxhomekeke kubungqina obuthile, kwaye nangona abafundi bebangela inkcaso ebomini babo imihla ngemihla, kunokuba kunzima kwabanye ukuba babonise amandla okwenza iingcamango kwisiqendu sokubhala, njengokuchaza igama ngokuvavanya isigama ixesha kwiimeko .
Ukuvumela abafundi ukuba babone imizekelo yokwenene yokwenza iziganeko kunye nokuhlala bebuza imibuzo efuna ukuba benze uqikelelo olusetyenziswayo usebenzisa imizekelo ethile, kuya kunceda ekuphuculeni amandla abo okwenza izinto ezingqinelanayo, ezinokuthi zihambe ixesha elide ukuqinisekisa ukuba zidlula iimvavanyo zokufunda eziqhelekileyo.
Ukuchaza izibheno kwiBomi boBomi
Ukuze kuphuhliswe olu buchule lokufunda okubalulekileyo, ootitshala kufuneka bancede abafundi baqonde ingqiqo ngokuyichaza ngombandela "wehlabathi lokwenene," ngoko ukuyisebenzisa ekuhloliseni imibuzo efuna abafundi ukuba benze iingqinamba banikele iinqununu neenkcukacha.
Zonke iintlobo zabantu zisebenzisa iziganeko kubomi babo bemihla ngemihla kunye nobungcali. Oogqirha benza ingxaki xa bexilongwa ngeemeko ngokujonga ii-X-ray, i-MRIs, kunye noqhagamshelwano nesigulane; abaphandi bendawo abaphandi benza iingqinamba xa belandela iimpawu ezifana neminwe, i-DNA, kunye neenyawo zokufumana ukuba kwaye kwenziwe nini na ulwaphulo-mthetho; i-mechanics yenza i-inferences xa iqhuba izifo, zixubusha kwi-injini, kwaye zixubane nawe malunga nendlela imoto yakho eyenza ngayo ukujonga into ephosakeleyo phantsi kwe-hood.
Ukunikezela abafundi abaneemeko ngaphandle kokubanika ibali elipheleleyo uze ubacele ukuba bacinge ukuba kwenzekani ngokulandelayo yindlela efanelekileyo yokuzibandakanya ukwenza inkcazo malunga nolwazi olunikeziweyo. Abafundi baya kufuneka basebenzise ithowuni, isichazi kunye nenkcazelo yesenzo, kunye nesitayela seelwimi kunye nokusetyenziswa ukucacisa oko kwenzeka ukuba kwenzeke, oko kanye kanye baya kufuna ukuyenza ekuvavanyeni kwezakhono zabo zokufunda ukuqonda.
Iingqinamba kwiimvavanyo eziPhakamileyo
Uninzi lweemvavanyo eziqhelekileyo zokufunda nokuqonda nesilulumagama ziquka inkoliso yemibuzo engaphethekiyo ecela umngeni ukuba asebenzise izikhokelo zenkcazelo ukuphendula imibuzo esekelwe kwisigama esisetyenziswayo okanye iziganeko ezenzeka kwinqanaba. Imibuzo eqhelekileyo kwimvavanyo yokuqonda yokufunda iquka:
Umbuzo ongasetyenziswayo uya kusebenzisa amagama athi "ukubonisa" okanye "ukungena" kwi-tag, kwaye ekubeni abafundi bakho baya kufundiswa malunga nokuba yiyiphi inqaku kunye noko kungenjalo, baya kuqonda ukuba ukuze bafike kwisigqibo, kufuneka basebenzise ubungqina okanye inkxaso evezwe kwinqanaba. Xa bekwazi ukwenza oku, banokukhetha impendulo engcono kwiimvavanyo ezininzi zokukhetha okanye ubhale ngcaciso emfutshane kwimimbuzo evulekile.
IMfazwe ka-Queen Anne
I-Abandon-Ship Ditch Bag
I-American League Eyona nto ibaluleke kakhulu kubadlali abaphumeleleyo